SES लाई अज्ञात रूपमा कसरी गुनासो गर्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
तपाई के भनिरहनु भएको छ, वाडिम क्रोक! र ती मानिन्छ र स्वीकारिन्छन् र उनीहरूलाई जरिवाना दिइन्छ। यदि हामी विचार गर्‍यौं कि गुनासो इन्टरनेट मार्फत प्राप्त भयो र उनीहरूले त्यहाँ के चाहान्छन् लेख्नुहोस् र उनीहरूले के चाहान्छन् भनेर संकेत गरे र वास्तविक व्यक्ति र उसको राहदानी कसैले पनि देखेन भने ऊ कुनै पनि तर्फबाट लेख्न सक्छ। के त्यो गुमनाम पत्र होइन?
बेनामी अपीलहरू (अपराधको रिपोर्टलाई अपवाद बाहेक) राज्य निकायमा मानिदैन। तपाइँको नाम लेख्नुहोस्, तर काल्पनिक, तपाइँको दावी तथ्य छ कि उनिहरु काम गरीरहेका छन्। प्राय: सबै संगठनहरूको साइटहरूमा इलेक्ट्रॉनिक अपीलको लागि एक फारम हुन्छ, यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्
बेनामी अक्षरहरू मानिदैनन्! कुनै पनि!
वा यो पहिले नै रगतमा छ - चुपचाप ड्रम गर्न?
तपाइँका राम्रा साथीहरू छन् कि तिनीहरूले त्यस्तै काम फ्याँकिएका छन् ... तिनीहरूले अज्ञात अक्षरहरूलाई विचार गर्दैनन्, आफैले लेख्ने छन् ... गुनासोमा जाँचहरू हुनेछन्, तिनीहरूले तपाइँको नाम घोषणा गर्ने छैनन् ...
तपाईंले केवल पूर्व निर्देशकलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभएन, तपाईं अभियोजकको कार्यालयमा के जानुहुन्छ - र एसईएस वा आर्थिक अपराध विभागमा पनि यदि तपाईंले भुक्तानी गर्नु भएन भने? उहाँबाट सबै कुरा जफत गरिएको छैन र उनले अभियोजकको कार्यालयमा फर्केर हेर्ने छैन। यो बेवास्ता गर्न असम्भव छ। सबै समान, तपाईं पहिले नै बाहिर निकालिएको छ, किन समारोह मा खडा।
अब चुनाव आउँदैछ, सबैलाई हाइप चाहिन्छ। हामीसँग फ्लोरमा पूर्ण रूपमा सामान्य कम्पनी छ। कलेजले हाम्रो परिचित कम्पनीबाट कक्षाकोठामा विन्डोजहरू अर्डर गर्यो। तिनीहरूले आफ्ना आमाबुवाबाट पैसा लिन शुरू गरे। बाबुआमा मध्ये एक क्रुद्ध थियो - किन यति धेरै? र जब मैले सत्य प्राप्त गरेन, म सिधा आर्थिक अपराध विभाग र अभियोजकको कार्यालयमा गएँ - उनीहरू भन्छन्, आवश्यक छ, यसलाई क्रमबद्ध गर्नुहोस्। तिनीहरू आपूर्ति कार्यालयमा हतार गरे, सुरक्षित खोले, यो पैसा पाए। र त्यो - यो मेरो होइन जस्तो - एउटा विन्डो कम्पनी हो। तिनीहरू विन्डो कम्पनीमा छन् - तिनीहरू भन्छन् कि तपाईले पैसा फिर्ता गर्नुभयो, कम्प्युटर जफत गर्नुभयो। निर्देशक आघातमा छ - म भन्छु, मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि पैसा कतै कतै त्यहाँ छ र मेरो इलाकामा छैन। तपाईं मलाई काम दिनुहुन्न। ठिक छ, हो, मैले विन्डोजमा उनीहरूलाई धोका दिएँ, तर कसैले पनी अनुबंध गरेको छैन। त्यसोभए कम्प्युटर3को लागी एक महिना को लागी फर्किएको छैन - उनीहरु सबै कुरा बुझ्छन्। र उनीसँग यसमा केही गर्नुपर्दैन।
SES लाई नभई Rospotrebnadzor विभागलाई लेख्नुहोस्, यो उनीहरूको शीर्षक हो। कथन मा, लेख्नुहोस् कि तपाइँ गोपनीयता राख्न को लागी सोध्नु हुन्छ, तिनीहरु यसलाई बेवास्ता गर्दैनन्।
एउटालाई जवाफ दिनुहोस् "SES लाई गुनासो गुनासो कसरी लेख्ने?"
28.04.2018 गर्न 14: 50
नमस्ते मेरो नाम स्वेतलाना हो। म तपाईंलाई भन्दैछु कि स्टोरमा स्ट्याश फिक्स गर्नुहोस्। कोरेत्निया गाउँ छ। तपाई स्टोरमा नआउनु भएको कारण विक्रेताले दर्शकहरूसँग कार्ड खेल्छन् र मदिरा पिउँछन्। उत्पादनहरूको समयावधि सकियो, हावामा मोल्ड सॉसेज भूमिगतबाट मदिरा बेचिन्छ। कृपया कार्य गर्नुहोस्।
23 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,385 प्रश्नहरू।